Salaamanews » Maamul u sameynta Jubooyinka oo billaabaneysa
Home » Warar Maamul u sameynta Jubooyinka oo billaabaneysa Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 11th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaMadaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay dhigiisa dalka Sudan Cumar Al-bashiirGalmudug iyo Ximan iyo Xeeb oo isku haya Dekedda HobyoKenya oo beenisay inay kala taageerto Beelaha SoomaalidaRa’isal wasaaraha Ethiopia oo si kulul uga hadlay qodobbo badan (Daawo)
(Salaamanews)-Shirka maamul u sameynta Jubooyinka ayaa la filayaa in todobaadka soo socda uu ka bilowdo magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose, halkaasoo ay gaari doonaan ergooyin ka kala socda deegaanada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo.
Inkastoo uu dhowaanahan jiray khilaaf ku saabsanaa qaabka dhismaha maamulka oo u dhaxeeyay Maamulka KMG ee Kismaayo iyo xubnaha kale ee shirka qaban qaabinayay ayaa la sheegay in la xaliyay wixii mad-madow ahaa ee ku saabsanaa habka dhismaha maamulka.
Warar ku dhow dhow gudiga farsamada ee qaban qaabinaya shirka oo ay xubno ka yihiin IGAD ayaa sheegaya in maalmaha soo socda la guda geli doono shirweynaha maamul u sameynta, iyadoo la sugayo in magaalada ay gaareen ergooyin ka kala socda beelaha dega jubooyinka iyo Gedo.
Mas’uul ka tirsan maamulka KMG ee Kismaayo ayaa sheegay in meel wanaagsan uu maryo shirka maamul u sameynta Jubooyinka, isla markaana ay bilaabatay qaban qaabadii u dambeysay, si loo guda galo shirweynaha.
Shirweynahan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah, iyadoo dadka u dhashay Jubooyinka ay dooranayaan maamul ay ku qanacsan yihiin.
Wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Arrimaha gudaha oo isugu jiray Wasiiro, Xildhibaano iyo Saraakiil ciidan ayaa tagay magaalada Kismaayo dhamaadkii bishii December ee sanadkii hore, iyadoo kala hadlay maamulayaasha Kismaayo sidii loo xalin lahaa khilaafka ka taagnaa arrimaha maamul u sameynta, isla markaana maamul dadka raali la yihiin loo sameyn lahaa.
Arrimaha maamul u sameynta Jubooyinka ayaa ahaa mid mudooyinkii u dambeeyay la hadal hayay, waxaana magaalada Kismaayo oo ah magaalada xarunta u ah Jubada Hoose gaarayay wafuud kala duwan oo isugu jirtay dowladda Soomaaliya, Odayaal, iyo saraakiil ka socotay IGAD.
Tags: warar « Qoraalkii HoreUganda oo ku raad joogta rag ku xiran al-Shabaab	Qoraalka Xiga »Ra’isal wasaare Shirdoon oo isbadal ku sameeyay golaha wasiirrada	Halkan Hoose ku Jawaab